Wararka - Falanqaynta Alaabta - dhinaca Macaamiisha
1. Shuruudaha tayada hawada ee isticmaalka silsiladda: hawo nadiif ah oo qalalan oo la cadaadiyey waa in la isticmaalaa. Hawada kuma jiri karto saliid dabiici ah oo dabiici ah, milix, gaaska wax dila, iwm, si looga hortago silsilad, fal xun. Ka hor inta aan la rakibin, tuubada xiriirisa waa in si buuxda loo afuufa oo la dhaqaa , Ha soo qaadin boodh, jibbaar, shandado ku xirida iyo wasakhda kale dhululubo, waalka.
2. Shuruudaha loo adeegsado bey'ada dhululubo: Meelaha leh boodh badan, dhibco biyo ah iyo dhibco saliid ah, dhinaca usha waa in lagu qalabeeyaa daboolida telescopic-ka ah Meel aan daboolida telescopic-ka la adeegsan karin, dhululubooyin leh giraan adag oo adag ama silsilado-biyood aan biyuhu lahayn waa in la xushaa. iyo heerkulka dhexdhexaadku ka badan yahay -10 ~ 60 ℃ oo leh aaladda magnetic, ka hortagga qaboojinta ama tallaabooyinka iska caabinta kuleylka waa in la qaadaa. Deegaanka bey'adda birlabta ee xoogga badan, dhululubada leh otomaatiga tooska ah ee aagga birlabta xoog leh waa in la xusho. looma isticmaali karo uumeystayaasha wax sunta ama uumiga ah ee ku xumbanaya giraan shaabad leh.
3. Sifeynta dhululubada:Dhululubbada saliidda lagu shubay waa in lagu qalabeeyaa aalad ceeryaamo saliid leh oo socodka ku habboon. Waa la isticmaali karaa waqti dheer maxaa yeelay dufan ayaa horay loogu sii daray silsiladda. Silsiladan sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa saliid, laakiin marka saliida la bixiyo, saliida waa inaan la joojin. Saliida waa in la siiyaa marawaxadaha maya. 1 (ISO VG32). Ha isticmaalin saliid, saliidda dunmiiqa, iwm, si aad uga fogaato ballaadhinta xumbada ee NBR iyo shaabadaha kale.
4. Cuntada silsiladda: Usha bistooska badanaa waxay taageeri kartaa culeyska foorarsiga oo keliya Iska ilaali inaad ku dhajisid culeysyada dambe iyo kuwa dhejiska ah ee ku dhegan bistooladda.Marka uu jiro xamuul transverse ah, usha piston-ka ee aaladda hagaha ah waa in lagu daraa, ama doortaa silsilad usha lagu hago, iwm. isbedelka jihada culeyska, usha bistoolada dhamaadka hore iyo culeyska * waxay isticmaalaan isku xirka sabeynta.Sidan oo kale, ma jiri doono wax jabin ah meel kasta oo safarka ah.Marka dhululubadu ku jirto xoog culus, miiska rakibida dhululubada waa inuu lahaadaa tallaabooyinka looga hortagayo dabacsanaanta, qalloocinta iyo dhaawaca.
5. Rakibaadda dhululubo: Markaad rakibayso dhululubo go'an, dhidibka xamuulka iyo bistooladdu waa inay isku mid ahaadaan.Markaad rakibayso dhegaha ama silsiladaha trunnion, hubi in diyaaradda lulid ee dhululubada iyo luliddu rarku kujiraan hal diyaarad.
6. Isbedelka xawaaraha dhululubo: Marka loo isticmaalo waalka xakamaynta xawaaraha si loo hagaajiyo xawaaraha dhululubada, waalka ceejinta waa in si tartiib tartiib ah loogu furaa xaalad xiran oo lagu hagaajiyaa xawaaraha la doonayo .Ku hagaaji tirada leexashada si aysan uga badin * tirada leexashada. Kadib hagaajinta, qufulka sayidka qufulka.
7. Kaydinta dhululubo: Marka tamarta dhaqaaqa ee dhululubada ah aysan si buuxda u dhuuqi karin silsiladda lafteeda, habka keydka ah (sida haydleef hawo-haye) ama loox wax lagu keydiyo waa in lagu daro banaanka.
8. Ku saabsan shaqada otomaatigga ah ee dhululubo:qalabka qalliinka otomaatigga ah, ka hortagayaasha waa in lagu qaadaa farsamada ama wareegga si looga hortago sameynta jirka iyo dhaawaca qalabka sababo la xiriira hawlgal qaldan iyo wareegga tallaabada silsiladda. Heerka culeyska: Laga soo bilaabo daraasadda astaamaha astaamaha socodsiinta, Way adag tahay in la go'aamiyo wax soo saarka dhabta ah of dhululubada korontada. Marka daraasadda waxqabadka iyo soosaarka dhululubada, dhululubada waxaa loo isticmaalay fikradda culeyska culeyska. Badeecada culeyska silsiladda beta waxaa lagu qeexaa sida beta = aragtida silsiladda iyo xoogga soo saarida culeyska dhabta ah F * 100% silsiladda Ft (l3-5), silsiladda xamuulka dhabta ah waxaa lagu go'aamiyaa xaaladda dhabta ah ee shaqada, haddii la xaqiijiyay silsiladda theta, heerka xaddiga waxaa lagu qeexaa aragtida dhululubo gaaska waa la go'aamin karaa, awoodda wax soo saarka, taas oo xisaabin karta ceelka dhululubo. Xamuul daruuriga ah, sida silsilad loo isticmaalo isku-haynta sambabada, rarku ma soo saarayo xoog aan firfircooneyn, guud ahaan xulashada culeyska culeyska beta waa 0.8; Xamuulka aan shaqeyneynin, sida silsiladda loo isticmaalo in lagu riixo goobta shaqada, rarku wuxuu dhalin doonaa xoog aan firfircooneyn, xamuulka Qiimaha sicirka waa sida soo socota: <0.65 marka dhululubada uu xawaare hoose ku socdo, V <100 mm / s; <0.5 Marka dhululubadu ku socoto xawaare dhexdhexaad ah, V = 100 ~ 500mm /s; <0.35 marka dhululubada dhaqaaqa xawaaraha sare ku socdo , v> 500 mm / s. SMC doorka birlabta magnetic: Qalabka furaha birlabta ee SMC waxaa inta badan loo adeegsadaa in lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqa mashiinada warshadaha, kala duwanaanta saamiga kacaanka ee 1: 1 ilaa 1: 150; Wadarta guud waxay ku haboontahay isku imaatinka meel yar, mashiinka wadida iyo mashiinka gawaarida gawaarida ayaa ah ka samaysan bir bir ah, qalabka iyo darawalada gawaarida waxaa laga sameeyaa si otomaatig ah saliidaha walxaha kulul, noocyada kala duwan ee walxaha iyo qaybaha waxay leeyihiin iska caabin xirasho wanaagsan, qalabkuna wuxuu leeyahay waxqabad wanaagsan oo biyo iyo boodh leh. mashiinada warshadaha, sida wiishka, iwm. Qiyaasta isbeddelka kacaanku wuxuu u dhexeeyaa 1: 1 ilaa 1: 9,400; Beddelaadaha xaddidan ee caadiga ah waxaa lagu rakibay 2, 3, 4, 6, 8, 10 ama 12 beddelaad degdeg ah ama gaabis ah iyo fiiqan CAM PRSL7140PI. Qaybaha kale iyo saamiga kacaanka waa la heli karaa marka la codsado. Samee amarro gaar ah. * Qiyaasta kacaanku waa 1: 9,400. Dhammaan agabyada iyo qaybaha waxay u adkeysanayaan daxalka, biyaha iyo boodhka.